Garoonka Jomo Kenyata ee dalka Kenya oo shir uga socdo Madaxweynaha Somalia iyo Madaxweynaha Dowlada Goboleedka Puntland – idalenews.com
Garoonka Jomo Kenyata ee dalka Kenya oo shir uga socdo Madaxweynaha Somalia iyo Madaxweynaha Dowlada Goboleedka Puntland
Madaxweynaha Somaaliya Xasan Shiikh Maxamuud iyo Madaxweynaha Puntland Dr, Abdirahmaan Faroole ayaa iminka shir waxaa uu uga socdaa garoonka diyaaradaha ee Joma kenyata kadib markii mid waliba uu si gaar ah uga soo ambabaxay Garowe iyo Muqdisho.
Dowlada Federaalka iyo Maamulka Puntland ayaa waxaa baryihii danbe u dhexeeyey khilaaf xoogan oo dhanka maamul u sameynta Jubbooyinka iyo Gedo ah iyo sidoo kale wax ka badelka dastuurkii dalka u yaalay, kaasi Madaxweyne Faroole sheegay in barlamaanka fadhiya Muqdisho inay waxbadan ka saareen kii horey loogu heshiiyey.
Madaxweyne Xasan Shiikh oo kusii jeeda Japan ayaa waxa uu rabaa inuu Faroole ku qanciyo sidii uuga laaban lahaa taageerada maamulka Jubaland maamulkiisa u fidiyey, waxaana rabaa inuu taasi badelkeeda ku wargeliyo Axmed Madoobe iyo Fartaag inay iska xaadiriyaan shirka dowlada ku qaban doonto Muqdisho.
Dhinaca kale Madaxweyne Dr, Abdirahman Faroole ayaa dhankiisa raba inuu Xasan Shiikh ku cadaadiyo inuu aqbalo natiijadii kasoo baxday shirkii mudada kasocday Kismaayo kaasi oo lagu soo dhisay maamulka federaalka ah ee Jubaland State ee uu Madaxweynaha ka yahay Axmed Madoobe, halka uu madaxweyne ku xigeen uu kayahay Gen, Fartaag.
Siyaasada labadan mas’uul ayaa ah mid si weyn u kala fog, waxaana la ogeyn waxa uu ku soo dhamaan doono shirkooda oo qaadan doona muddo laba saac ah. Kadibna uu Madaxweyne Xasan Shiikh uu usii gudbi doono Japan halka uu Faroole isagana gudaha u soo geli doono Nairobi oo sida la sheegay uu kasii aadi doono Dubia iyo Itoobiya.
Wixii warar ah ee kusoo kordha wadahadalka madaxweynaha Soomaaliya Xasan Shiikh iyo Madaxweynaha Puntland Abdirahmaan Faroole ee ku aadan arrimaha maamulka Jubaland kala soco wararka danbe ee idalenews.com
Beesha Xawaadle oo sheegtay in Kalsoonidii kala noqdeen Dowlada Federaalka Soomaaliya & xildhibaan Max’ed Xasan Qoone oo arintaas ku taageeray Beesha